हवाई जहाजको रङ किन सेतो हुन्छ ? यस्तो छ तथ्य - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
हामीमध्ये कतिले हवाई जहाजमा यात्रा गरेका छौं । तर हवाई जहाज (विमान) सँग जोडिएका केही तथ्य यस्ता पनि छन् जसबारे सायद तपाईंलाई थाहा छैन । आउनुहोस्, यसबारे जानकारी लिऔंः
किन हुन्छ हवाई जहाजको रङ सेतो ?
उचाईमा उड्दा विमान बाहिर र भित्रको प्रेशरमा निकै अन्तर हुन्छ । यदि विमानको झ्याल ठूलो भए त्यसको सिसा टुट्ने सम्भावना बढि हुन्छ । तर तपाईं सोचिरहनुभएको होला कि ककपिटको झ्याल ठूलो र चार कुना किन हुन्छ रु वास्तवमा, चालकले बाहिरको दृश्य स्पष्ट रुपमा देखून् भन्नका लागि ककपिटको झ्याल ठूलो बनाइएको हुन्छ । यसमा प्रयोग गरिएका सिसा अत्यधिक बलियो र धेरै नै महँगो हुने गर्दछ ।